1954-1964 Evinrude जनसन 5.5 HP धुन अप परियोजना | जहाज को बाहिर नाउ मोटर मर्मत
1954-1964 Evinrude जनसन 5.5 HP धुन अप परियोजना
तपाईंको मोडेल नम्बर फेला
1954-1964 Evinrude र जनसन 5.5 HP जहाज को बाहिर डुङ्गा मोटर मोडेल नम्बर सन्दर्भ। मोडेल नम्बर सामान्यतया इन्जिन कोष्ठ को पोर्ट पक्षमा माउन्ट छ। तपाईंले मोडेल नम्बर छ, यो तपाईंको मोटर लागि वर्ष पाउन मोडेल नम्बर सन्दर्भ.
यहाँ हो भागहरु को सूची तपाईंलाई आवश्यक धुन तपाईँको 1954-1964 गर्न Evinrude र जनसन 5.5 HP जहाज को बाहिर डुङ्गा मोटर.
यो प्रक्रिया पालना धुन तपाईँको 1952-1967 Evinrude वा जनसन3HP जहाज को बाहिर मोटर गर्न। यो पृष्ठ यी मोटर्स राम्रो चलिरहेको प्राप्त गर्न कसरी चित्र, वर्णन, र सल्लाह को धेरै छ। तपाईं आफ्नो मोटर मा एक धुन अप प्रदर्शन को प्रक्रिया मार्फत कदम कदम लगिनेछ।
साथै जाँच गर्नुहोस् 5.5 एचपी जॉनसन 1960 मोडेल सीडी-17 बोस्से "बो" पीटरसन - स्टकहोम, स्वीडन द्वारा परियोजना
चेतावनी दबाव इन्धन ट्यांक बारे - यी मोटर्सले दबावित ईंन्धन टैंक प्रयोग गर्दछ। टैंकबाट ईंन्धन चिसो गर्नुको सट्टा, दोहोर्याइएको लाइनले टैंकमा हावा पम्प गर्छ, यसलाई 4-7 PSI लाई थिचाइन्छ जसले मोटरलाई फर्काउँछ। मूलतया, यी दबावित टैंक एक अत्यन्त खतरनाक आगो वा विस्फोट खतरा हो। यहाँ क्लिक यी ट्यांक र कसरी नयाँ र सुरक्षित इन्धन ट्यांकी गर्न रूपान्तरण गर्न बारेमा थप जान्न।
टिप्पणीहरू यो परियोजना बारे